I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo ye-AI yayo "TAPAS" | Kusuka kuLinux
I-Google imemezele ukukhishwa kwekhodi yomthombo ye- "TAPAS" (I-TAble PArSing), inethiwekhi ye-neural (ukuhlakanipha okungekhona okwangempela) ithuthukiswe ngaphakathi ukuze kuphendulwe umbuzo ngolimi lwemvelo bese uthola impendulo kusuka ku-database yobudlelwano noma ispredishithi.
Ukuze uthole imiphumela emihle ku-TAPAS, onjiniyela abaphethe iphrojekthi bazinikele ekuqeqesheni inethiwekhi ye-neural enamabhangqa ayisigidi esingu-6.2 table to text taken from Wikipedia. Ukuqinisekisa, inethiwekhi ye-neural kwakudingeka ibuyise amagama alahlekile kuwo womabili amatafula nasemibhalweni eyayingaqeqeshiwe kuyo. Ukunemba kokutakula kwakungu-71,4% njengokuhlolwa kwebenchmark kukhombisile ukuthi inethiwekhi ye-neural inikeza izimpendulo ezinembile noma eziqhathaniswayo kunama-algorithms ayizimbangi kuwo womathathu amasethi wedatha.
1 Mayelana neTAPAS
2 Ungayifaka kanjani i-TAPAS ku-Linux?
Ngokuyisisekelo okugxilwe kulo msebenzi ukukwazi ukubonisana, ukucubungula kanye nokuveza ulwazi ezihlobene nemibandela yombuzo eyenziwe ngumsebenzisi ngolimi lwemvelo, okwenza kube lula ukuthola ulwazi.
Isibonelo esiyisisekelo sokusetshenziswa kwe-TAPAS uma umsebenzisi efuna ukuhlola idatha yokuthengisa, imali engenayo, izicelo, phakathi kwezinye izinto. Ngaphandle kwalokho kufanele ukubheke lokho I-TAPAS ayigcini ngokuthola imininingwane ku-database kuphela, kepha futhi iyakwazi nokwenza izibalo, i-algorithm ibheka impendulo kumaseli wetafula, kokubili ngqo nangokusebenzisa ukuhlanganisa, isilinganiso kanye nabanye opharetha, ngaphandle kwalokho ingafuna impendulo phakathi kwamatafula amaningi ngasikhathi sinye.
IGoogle ithi iTapas Outperforms noma ifanisa ama-algorithms aphezulu amathathu womthombo ovulekile ukuhlaziya idatha ephathelene nobudlelwano. Amandla kaTapas okukhipha izinto ezithile kusuka ezinqolobaneni ezinkulu zedatha nazo zingaziboleka ekuthuthukiseni amandla okuphendula.
Ngaphansi, I-Tapas isebenzisa ukwehluka kwe-BERT inqubo yolimi yemvelo isetshenziswe ekusesheni okwenziwe yinjini yeGoogle.
I-BERT inikeza ukucacisa okukhulu kunezindlela zendabuko ngoba ivumela i-AI ukuthi ihlole ukulandelana kombhalo hhayi kuphela ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla noma kwesokudla kuye kwesobunxele njengokujwayelekile, kepha kwenza ngasikhathi sinye.
Uhlobo olwenziwe i-Google yi-TAPAS luvumela i-AI ukuthi ingabheki kuphela umbuzo obuzwe abasebenzisi nedatha abafuna ukuyibuza, kepha futhi nesakhiwo samatafula obudlelwano lapho idatha igcinwa khona.
Ungayifaka kanjani i-TAPAS ku-Linux?
Kusukela I-TAPAS empeleni iyimodeli ye-BERT ngakho-ke inezidingo ezifanayo. Lokhu kusho ukuthi imodeli enkulu ingaqeqeshwa ngobude bokulandelana obungu-512 obuzodinga i-TPU.
Ukuze ukwazi ukufaka i-TAPAS ku-Linux sidinga i-protocol compiler, engatholakala ekusatshalalisweni okuningi kweLinux.
Ku-Debian, Ubuntu nokutholakala kwalokhu, singafaka umhlanganisi ngomyalo olandelayo:
Endabeni ye-Arch Linux, Manjaro, Arco Linux noma enye into etholakala ku-Arch Linux, sifaka ne:
Manje ukuze sikwazi ukufaka i-TAPAS, kufanele nje sithole ikhodi yomthombo bese sihlanganisa nemiyalo elandelayo:
git clone https://github.com/google-research/tapas
Futhi ukusebenzisa i-suite yokuhlola, sisebenzisa umtapo wezincwadi we-tox ongasetshenziswa ngokubiza:
Ukusuka lapha i-AI kuzofanele iqeqeshwe endaweni yesithakazelo. Noma amamodeli athile aqeqeshiwe ahlinzekwa endaweni yokugcina izinto zeGitHub.
Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa izinketho ezahlukahlukene zokumisa, njengokukhetha ubude obungu-max ukudala ukulandelana okufushane. Lokhu kuzonciphisa ukunemba kepha futhi kuzokwenza imodeli ye-GPU iqeqeshwe. Enye indlela ukunciphisa usayizi we-batch (train_batch_size), kepha lokhu kungenzeka kuthinte nokunemba.
Ekugcineni uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo Mayelana nale AI, ungabheka imininingwane yokusetshenziswa, ukwenziwa nolunye ulwazi Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo ye-AI yayo "TAPAS"